Apple Music vs iCloud Music Library vs iTunes egwuregwu
Ihe Ị Mkpa Ịmata tupu Ihichapụ Photos si iCloud
• ndabere - Tupu ị hichapụ gị foto gị iCloud nchekwa / ndabere, jide n'aka na ị kwadoo ihe oyiyi na-mpụga media ma ọ bụ ọnọdụ site ebe ha nwere ike Ewepụtara mgbe ọ bụla mkpa. Ime otú ana achi achi na ọkacha mmasị gị photos na-adịghị ruo mgbe ebighị ebi na ezi ihe.
• Mmetụta All Apple Devices - Iwepụ foto site na gị iCloud nchekwa / ndabere eme ka ị nọgide si na-eweghachiri ha mgbe ọ bụla ọ dị mkpa na a na-emetụta niile Apple ngwaọrụ metụtara na akaụntụ. Nke ahụ bụ ihe ọzọ mere na-ewere a ndabere nke niile foto tupu wepụ ha dị mkpa.
• irreversible Action - The foto mwepụ usoro si gị iCloud akaụntụ bụ irreversible na-ehichapụ photos apụghị-akpọlite ​​gwụla ma ị kwadoo ha ebe ọzọ. Ebe ọ bụ na mwepụ edinam replicates na niile Associated ngwaọrụ, usoro enweghị ike imegharị si ọ bụla n'ime ha ma.
Olee otú Hichapụ Photos si iCloud Nchekwa / ndabere
Mgbe nghọta na-esi nke ihichapụ foto site na iCloud nchekwa / nkwado ndabere na mpaghara mgbe na-ewere chọrọ jikoro gbochie ọ bụla data ọnwụ, ị nwere ike na-eso nzọụkwụ nyere n'okpuru ka ihichapụ foto:
Na gị Windows ma ọ bụ Mac kọmputa, na-emeghe weebụ ọkacha mmasị gị nchọgharị.
Na adreesị mmanya, pịnye www.icloud.com na pịa Tinye. (Of N'ezie kọmputa ahụ ga-jikọọ na Ịntanetị.)
Na banye na iCloud page, Pịnye gị iCloud ID na paswọọdụ na mkpa ubi na iti Tinye.
Na nyochaa njirimara gị igbe, pịa iji họrọ tụkwasịrị obi ngwaọrụ site na listi inweta ihe Nyocha koodu.
Pịa Osote si n'elu-nri akuku nke igbe.
Cheta: nzọụkwụ 4 na nke 5 na-amanyere bụ iwu ọ bụrụ na i nyeere abụọ-Nzọụkwụ nkwenye ma ọ bụ abụọ-lekọtara nyocha na gị Apple ID. Bụrụ na ọ bụghị ya, ị gaghị-kpaliri ji amata nkwenye.
Na Tinye nkwenye koodu igbe, na dị ubi, pịnyere nkwenye koodu na ị natara n'aka Apple na họrọ tụkwasịrị obi ngwaọrụ ke nzọụkwụ 4.
Ozugbo mere, na isi peeji, pịa Photos akara ngosi.
Site n'elu nke iCloud Photos peeji, pịa Albums button si center.
Pịa All Photos album si peeji na-esonụ.
Site n'elu-n'akụkụ aka ekpe nke meghere peeji nke, pịa Họrọ Photos.
Pịa họrọ foto site na album na ị chọrọ ka ihichapụ.
Pịa Hichapụ si acha anụnụ anụnụ mmanya n'ụlọ n'elu.
Na nkwenye igbe na-abịa, pịa Hichapụ ka ihichapụ họrọ foto gị iCloud nchekwa.
Olee otú Hichapụ Pictures si iCloud si Photo Stream
1. Turn na gị iPhone ma ọ bụ iPad metụtara gị Apple iCloud ID. (iPhone 4S mee ihe n'ebe a.)
2. On gị iPhone si Home ihuenyo, mgbata Ntọala.
3. Site Ntọala window, enweta iCloud.
4. Site iCloud window, enweta Photos.
5. Ozugbo Photos window emepe, ịchọta na Mia My Photo Stream button n'aka-ekpe.
6. On nkwenye igbe, pịa Hichapụ-ewepụ ihe niile na foto gị iCloud si Photo Stream.
One-Pịa onwe elu karịa Nchekwa na gị iPhone
Ọ bụ ezie na ị pụrụ onwe elu gị iPhone si nchekwa mgbe ọ bụla ị chọrọ, usoro na-anọgide ịma aka ruo mgbe ị na-eji ihe ọ bụla oru oma-atọ ndị ọzọ cleanup ngwá ọrụ. Wondershare Mere oké Job site na-emepe emepe SafeEraser na ọ bụghị naanị na-enyere gị ọcha gị iPhone si esịtidem nchekwa na otu-pịa ma na-enye gị na-ebuli gị ịrụ ọrụ ekwentị site na iwepu na-achọghị na junk data site na ya.
A ole na ole isi atụmatụ na Wondershare SafeEraser-enye bụ:
• ihichapu niile Data - Nke a na nhọrọ na-enyere gị ọcha gị iPhone site erasing ya niile data na-eme ekwentị gị dị ka ọhụrụ.
• ihichapu ehichapụ faịlụ - Nke a mma-enye gị ka kpamkpam-ebibi ndị niile na-ama ehichapụ faịlụ. Na nke a, ehichapu faịlụ aghọ unrecoverable na Ya mere gị onwe onye data-apụghị gụrụ bụla na-achọghị onye.
• Ihichapu Private Data - kwesịrị ị chọrọ iji wepu gị onwe data dị ka Safari kuki, Safari cache, ma ọ bụ akụkọ ihe mere eme Safari si gị iPhone, a nhọrọ bụ maka gị.
• Space nchekwa - Nke a na atụmatụ-enyere gị aka mpikota onu oyiyi nile ịchekwa na gị iPhone si nchekwa. Site n'ime otú ahụ, ị nwere ike naghachi a bukwanu ego nke ohere nchekwa na ngwaọrụ gị.
Jiri Wondershare SafeEraser ịrụ One-Pịa nzacha na mkpocha
Jiri n'elu njikọ ibudata na wụnye ziri ezi version nke Wondershare SafeEraser ka kwa gị na kọmputa. (A Windows kọmputa na-eji ebe a maka screenshots na ngosipụta.)
Ẹkedori Wondershare SafeEraser site abụọ-ịpị ya akara ngosi.
Site na isi interface, pịa 1-Pịa Cleanu p button (na akara ngosi nke a sweeper).
Chere ruo mgbe Wondershare SafeEraser-enyocha kwa maka faịlụ na ike ga-ehichapụ naghachi ohere nchekwa na-ebuli iPhone ịrụ ọrụ.
Ozugbo mere, lelee na checkboxes na-anọchi anya faịlụ na data na ị chọrọ iji wepụ si gị iPhone.
Pịa nzacha na mkpocha na ala-nri akuku.
Chere ruo mgbe Wondershare SafeEraser ọcha elu na-achọghị data.
Nso Wondershare SafeEraser.
Malitegharịa ekwentị gị iPhone n'ihi na mma ịrụ ọrụ.
Nhicha gị iDevice na-agbake ya ohere nchekwa pụrụ ịghọ nnọọ mfe na enyemaka nke otu oru oma-atọ ndị ọzọ ngwá ọrụ. Ekele Wondershare maka na-emepe emepe ihe niile na-na-otu ngwa na-eme ka onye ọ bụla ndụ mfe.
> Resource> iCloud> Olee otú iji Hichapụ Photos si iCloud